Egwuregwu Egwuregwu, Egwuregwu Egwuregwu, Sod Grass Mat - Wanhe
Wanhe Grass bu uzo di elu nke ntaneti na-ejikọ R&D, mmeputa na ire ahia ma nye aka ka ha buru ezigbo ndi na-eweta oru ahia na imeputa ubi nke ahihia aka. Huai'an Wanhe Industry na Trade Co., Ltd. emi odude ke Bank nke Beijing-Hangzhou Grand Canal na mara mma. Ọ bụ obodo nke Zhou Enlai, nwoke ukwu nke ọgbọ, Huai'an City, Jiangsu Province. Xinchang Railway na Beijing-Shanghai Expressway gafere obodo ahụ na njem dị mfe. Ngwa ndị bụ isi bụ ahịhịa egwuregwu na ahịhịa na ngwaahịa ndị ọzọ site na ụlọ ọrụ anyị. Anyị emeela mmekọrịta dị ogologo ma kwụsie ike na ọtụtụ ndị na-ere ahịa na ndị ọrụ n'ime afọ 20 gara aga.Eksports na-enweta ihe karịrị 80% nke ahịa niile.
Ezubere na ebe Wanhe Grass maka golf ka emeputara ma meputa ya dika ihe omuma di iche iche na-acha ndu ndu, na-enye ezigbo ihe omuma banyere uzo na ime ihe. Ọdịmma ya zuru oke na-ekwe nkwa mpịakọta bọọlụ zuru oke ma na-enye nkasi obi dị ụtọ mgbe ị na-egwu ya.
Ahụmịhe Wanhe Grass na-eke ahịhịa amị maka ọtụtụ egwuregwu na-enye anyị ohere ịnye ngwaahịa dị elu maka ọtụtụ ihe eji eme ihe, dịka 11-a-side na 7-a-side football football, football and hockey field and football and rugby field .
You ma ọtụtụ ndị ahịa na-azụta ahịhịa sitere na artificiallọ Ahịa ma ọ bụ ụlọ ahịa N'onwe Gị? Ọ bụ ngwaahịa ọhụrụ na-ekpo ọkụ maka ndị mmadụ Mee N'onwe Gị. Wanhe Grass Landscape abanyela na ụlọ ahịa Chain a maara nke ọma ma jupụta na ahụmịhe nke ịnye ụlọ ahịa ndị nwere nhọrọ dị iche iche: tụgharịa 2X25m, mpịakọta 1x4m, ute 1X1m, pad 30X30cm.
Mụ na Wanhe na-arụkọ ọrụ afọ 5 na ahịhịa. Ọ bụ ezigbo ahịhịa! M na-eji ya maka ọdịdị ala m na-arụ ọrụ ma nweta nzaghachi dị ukwuu site n'aka onye ọrụ njedebe, ma nwee nnukwu azụmahịa na ihe ịga nke ọma. Ekele Wanhe Grass Team.M ga - akwado ngwaahịa a!
Y’oburu n’acho izutara gi nke a, igaghi enwe mmechuihu. Ọ nwere ezigbo ahịhịa na-enwe mmetụta nke ahịhịa zuru ezu ma jiri ogologo oge. Ọ bụ nnukwu ngwaahịa maka nnukwu ego ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma!
Dịgidere ngwa ngwa ma mee nke ọma. Enwere ihe ọkụkụ dị iche iche dị iche iche iji gbakwunye na adị adị. Qualitydị kacha mma! Ezi emeputa! Enweghị nsogbu na ngwaahịa ma ọlị. Nke a bụ ihe m na-achọ. Zuru oke zuru oke maka klọb m niile.
Super tụrụ aro emeputa! Mbupu ngwa ngwa. Ngwaahịa dị mma, ahịhịa dị nro ma dịkwa adị. Ngwugwu ngwugwu dịkwa ezigbo mma. Ha nwere oke mma na ikike nke mmepụta a ka akọwapụtara maka anyị maka na anyị maara na ha nwere ike inye anyị azịza. Ha loading otu na ahịa bụ nnọọ ọkachamara. Na-atụ aro.
Japan- な か だ
Ọkachamara Artificial Green Carpets Ezie maka odida obodo. Onye na-ere ahia ahụ bụ ọkachamara na ngwa ngwa ịza ajụjụ. Companylọ ọrụ ahụ n'ozuzu ya yiri ka ọ dị ezigbo mkpa maka ndị ahịa. Aga m akwado ịkwado ịzụ ahịa na onye na-ere ahia a n'ọdịnihu.
Dị ezigbo mma ngwaahịa, yana ezigbo ọrụ enyi, ezigbo ụlọ ọrụ ọkachamara. Daalụ Wanhe Grass, anyị ga-akwado n'oge na-adịghị anya.
Ihe ndị ahịa anyị kwuru
Ogige Astro Turf, Nchikota ahihia ahihia ahihia ala, Bọọlụ Turf Grass, Wuru Lawn, Caromi Ahịhịa Grass, Ru Egwuregwu Golf Grass,